नेपाली बजारमा 'टाटा इन्ट्रा भी २०' बढ्दो लोकप्रियता, यस्ता छन् फरक नयाँ फिचर, कति पर्छ मूल्य ? - Arthatantra.com
नेपाली बजारमा ‘टाटा इन्ट्रा भी २०’ बढ्दो लोकप्रियता, यस्ता छन् फरक नयाँ फिचर, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौं । टाटा इन्ट्रा गाडी नेपाली बजारमा निकै प्रभावकारी मानिएको छ । नेपाली बजारमा यो गाडी भीट १० र भी २० गरी दुई मोडेलमा उपलब्ध छ ।
टाटा मोटरर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले इन्ट्रा गाडी बिक्री गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा भित्रिएको भी २० गाडी ग्राहकको रोजाईमा पर्न सफल भएको छ ।
झट्ट हेर्दा पनि आकर्षक डिजाईन रहेको यो गाडी १४ सीसी र ४ सिलिण्डरको हो । यो अलिबढी लामो यात्राका लागि उपयुक्त मानिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
यसमा बीएसपोर इन्जिन रहेको छ । जसले प्रदुषण कम गर्छ । माइलिज, इन्जिनको लाइफ लगायतमा धेरै फरक रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार भी २० दिनमा ७ सयदेखि १ हजार किलोमिटरसम्म ओहोर दोहोर गर्न सक्दछ ।
यसको डिजाइन एरोडाइनामिक रहेको छ । जसलाई फेशपिल जिडाइन पनि भनिन्छ । यो ठुलो वीन्ड स्क्रीन भएको गाडी हो । जसले चालकलाई धेरै टाढासम्म देख्नका लागि सहज हुन्छ । यसमा सुविधा सम्पन्न आरामदायी सिटहरु र आधुनिक डिजिटल क्लस्टर पनि रहेको छ ।
यसको भरपर्दाे एंव विश्वसनीय इन्जिन, गियर बक्स, क्राउनर च्यासिसको सम्योजनले समस्टिमा न्यून मर्मत खर्च गराउँने कम्पनीले जनाएको छ ।
यो अन्य सामान बोक्ने गाडीहरु भन्दा पनि अलि आकर्षक रहेको छ । यसमा क्रोमको प्रयोग गरिएको छ । यसको लम्बाई ८.३ फिटको रहको छ । यसको सेग्मेन्टमा यो एकदमै फराकिलो र बीड क्वालिटी पनि मजबुत रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यसको बोक्न सक्ने क्षमता पहाडी क्षेत्रमा ११ सय केजी अर्थात ११ क्वीन्टल रहेको छ । सहरी क्षेत्र अथवा काठमाडौं उपत्यका भित्र २ टनसम्म बोक्न सक्ने बताइएको छ ।
यसमा १४ इन्चको रिडियल टायर रहेको छ । यसको ग्राउण्ड क्लिरियन्स १७५ एमएमको रहेको । डिजिटल इन्स्टुमेन्ट कलस्टर रहेको छ । जुन यो सिग्मेन्टमा नै पहिलो हो ।स्ट्यरिङ पनि हल्का र नरम रहेको छ । भी२० को नेपाली बजारमा मूल्य २० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
नेपालमा भी २० हाल नीलो रङमा मात्र उपलब्ध रहेको छ । कम्पनीका अनुसार अर्को वर्ष भी ३० पनि नेपालमा ल्याउने तयारी रहेको छ । भी३० अहिले भारतमा उपलब्ध रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ असोज २१ बिहीवार १८:३८ मा प्रकाशित
News Views: 238
अघिल्लाे मल ल्याउन नसकेर कालोसूचीमा परेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले आइपीओ निष्काशन गर्ने
पछिल्लाे कति छ आज तरकारी तथा फलफूलको बजार मूल्य ? (सूचीसहित)